Commandos 2 HD Remaster neLinux tsigiro yechando | Linux Vakapindwa muropa
Commandos 2 HD Remaster neLinux inotsigira yechando
Imwe yemaitirwo azvino muvhidhiyo mutambo wepasirese ari kudzoreredza ngano mazita kubva kare uye kuvadzidzisa iwo ari nani mifananidzo. Nzira yekugutsa vese avo vasina hanya nekuda kwemazita aya vanozogona kunakidzwa nezviri mukati nemagiraidhi ari nani zvakare. Uye izvo zvakare zvinoita kuti kumwe kuburitswa kutora mukana wekushanda kune mamwe mapuratifomu mavaisamboita kare. Ndiyo nyaya ye Commando 2 HD Remaster, iyo ichauya neLinux rutsigiro rwechando.
Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve Commandos 2 HD Remaster, unogona kushanyira iro chitoro peji ValvesSteam, kunyange iri zvakare mu mamwe mapuratifomu senge GOG uye Chitoro Chinozvininipisa. Ikoko iwe uchaona kuratidzwa kwezvaunogona kuwana uye nerumwe ruzivo ...
Mushure mekumirira kwenguva refu, iyo Linux PC vhezheni yeCommandos 2 - HD Remaster ichaonekwa munguva ino yechando. Vateveri veiyi inodiwa-saga yeiyo 2002 nzira yemavhidhiyo mutambo wakagadzirwa naPyro Studios uye Eidos Interactive vachadzoka nemifananidzo yekuwedzera mushure mekumisikidzwa kwayo. Nezvose zvepakutanga uye nekuvandudza nekuda kweKalypso Media, muridzi wekodzero yezita iri nhasi.
Iyo vhezheni ye macOS, Nintendo Shandura uye Linux zvakarongerwa chirimo, asi mushure mekunonoka kwaSARS-CoV-2, fungidziro dzekuvhurwa kwayo mumatsutso dzaive dzisiri dzechokwadi futi, zvinoita sekunge ivo vapedzisira vasimbisa pane yavo yepamutemo Twitter kuti achasvika munguva yechando.
Yippee! Varaidzo irikushandawo paiyi vhezheni yeCommandos 2 ne nhau akadai se:
HD kuyeuchidza iyo mifananidzo.
Kugadziriswazve kwekudzora uye mushandisi interface.
Nzvimbo dzinopindirana dzekuba mayunifomu nezvombo kubva kuvavengi, kukwira matanda, kusvetuka netambo, kushambira, kushandisa mota, kupinda nekubuda muzvivakwa, ngarava uye ndege, nezvimwe.
Uine 9 yakasarudzika mavara aunogona nawo akasiyana hunyanzvi uye hunyanzvi. Seye green beret, sniper, sapper, diver, spy, uye mbavha.
Inobatanidza yazvino 3D injini kuti ikwanise kutenderedza nharaunda 360º, kupinda nekubuda munzvimbo, kuswededza mukati nekubuda (Zoom).
Yechokwadi WWII zviitiko zvine gumi mamishini munzvimbo gumi nemasere uye husiku zvine mamiriro ekunze ekunze.
Hwakawanda hunyanzvi, zvombo, uye mota zviripo (jeeps, matangi, marori, ndege, zvikepe, ...).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Commandos 2 HD Remaster neLinux inotsigira yechando
HD ??? Chii chinonzi gehena ichi 2009?